Virus (ဗိုင်းရပ်စ်) ဆိုတာဘာလဲ? - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Featured»Virus (ဗိုင်းရပ်စ်) ဆိုတာဘာလဲ?
By admin on	 May 26, 2020 Featured
ဗိုင်းရပ်စ် (Virus) ဟာ ဗက်တီးရီးယား (Bacteria)၊ ပါရာဆိုက် (Parasite) လို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေနဲ့ ဘာကွာခြားသလဲ? Virus ဆိုတာဘာလဲ?
Virus ကို အနုဇီဝကြည့်မှန်ပြောင်း Electron Microscope နဲ့ ကြည့်ရမယ်၊ ရိုးရိုး Microscope နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် သာမန်အားဖြင့် မမြင်နိုင်ဘူး၊ ကောင်းမွန်ရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်ဖို့အတွက် Electron Microscope တောင်မှ မီးတွေနဲ့ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ ကြည့်မှသာ မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အနုဇီဝအကောင်လေးတွေထဲမှာ Virus က အသေးငယ်ဆုံးပဲ။
(Bacterium/Bacteria) ဗက်တီးရီးယား ဆိုတဲ့အကောင်လေတွေက ဆဲလ်လေးတွေနဲ့နေတယ်၊ သူတို့တွေဟာ မျိုးပွားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
Parasite လို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်အမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငှက်ဖျားပိုးလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်၊ အဲ့ပိုးတွေက ကြီးထွားတယ်၊ အဆင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်၊ သူတို့ရဲ့ ဘဝသံသရာ (Life Cycle) ဆိုတာရှိတယ်၊ အဆင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး “ခြင်”ထဲကိုဝင်သွားတယ်၊ အဲ့ဒီကနေ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပုံတွေကို Electron Microscope ထဲမှာ ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒါဟာ Parasite ဆိုတဲ့ ကပ်ပါးကောင်လေးတွေ သွေးဥထဲကိုဝင်တယ်၊ သွေးတွေပေါက်ထွက်ကုန်တယ်၊ ဒီလို အသေးအမွှားလေးတွေအစ ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ အဲဒီအမျိုးစားတွေထဲမှာ (Bacterium) ဗက်တီးရီးယား၊ (Parasite) လို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပါးကောင်တွေထက် Virus ဟာအသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် တချို့က အသက်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ သုံးသပ်ကြတယ်။ (Bacterium) ဗက်တီးရီးယား၊ (Parasite) လို့ခေါ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေကိုတော့ သက်ရှိလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ Virus ကိုတော့ ဘာကြောင့် အသက်မရှိဘူးလို့ပြောကြတာလဲ။ Virus ဖွဲ့စည်းပုံဟာ မျိုးရိုးဗီဇပါဝင်တဲ့ မော်လီကျူးလေးတွေဖြစ်တယ်၊ ဆံချည်မျှင်ထက်တောင် သေးငယ်ပါတယ်။ အမှုန်အမွှား မော်လီကျူးလေးသာဖြစ်ပြီး (Bacterium) ဗက်တီးရီးယား၊ (Parasite) လို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပါးကောင် တွေလိုမျိုး မျိုးမပွားနိုင်ပါဘူး၊ အဲ့ဒါကြောင့် Virus ကို သက်ရှိအဖြစ် မသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။
Virus ဆိုတဲ့စကားလုံးက Varion ဆိုတဲ့လက်တင်စကားက ဆင်းသက်လာပြီး သူ့အဓိပ္ပာယ်က (Poison) အဆိပ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဒီအမှုန်လေး သေးသေးလေးတစ်ခုက Virus/အဆိပ်ဖြစ်ပြီး လူတွေရဲ့ ဆဲလ်၊ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဆဲလ်၊ သစ်ပင်တွေရဲ့ ဆဲလ်တွေထဲ ဝင်သွားပြီးရင်မှ စတင်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်၊ မျိုးပွားတာမဟုတ်ပဲ အကောင်ရေပွားတာဖြစ်ပါတယ်။
(ဥပမာ- ဓာတ်ပုံ Copy ပွားတာနဲ့ တူညီပါတယ်)။ Virus ကိုမျိုးရိုဗီဇနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇပါလို့ တစ်ချို့က သက်ရှိလို့သတ်မှတ်ပေမယ့်၊ မျိုးမပွားနိုင်တဲ့အတွက် သက်ရှိမဟုတ်ပါဘူး။ Virus ကို သတ်လို့မရတာတွေရှိတယ်၊ လူထဲရောက်မှ သေအောင်ပြန်လုပ်ရတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Virus တော်တော်များများက သူအလိုလို ကွယ်ပျောက်တာများပါတယ်။
လူခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားရင်တောင် တချို့ Virus တွေဟာ သူ့လိုလို သေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Virus ဟာ သူ့အလိုလိုမပျက်စီးခင် တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ဒဏ်က Corona Virus လိုမျိုး အဆုတ်ကြီးတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားတာမျိုး၊ တစ်ရှူးဆဲလ်တွေ ပျက်စီးသွားတာမျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်ချို့ ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် လူကို သေစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Virus ဟာ (Poison) အဆိပ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လူတွေကို တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Virus ဟာ သူ့ပုံတူပွားဖို့အတွက် လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ သစ်ပင် တစ်ခုခုရဲ့ ကလက်စီးလိုအပ်ပါတယ်။ လူတွေစီ Virus ရောက်ဖို့ဆိုရင် အရေပြား၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း၊ မျက်စိ၊ နားထဲကဝင်တဲ့ Virus ရှိတယ်။ လိင်ကနေတစ်ဆင့်ကူးတဲ့ Virus ရှိတယ်။ အမျိုးမျိုး ဝင်ပေါက်တွေရှိတဲ့အထဲကမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်က အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေ ကူးစက်တဲ့ Virus ဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်သက်ရောဂါ၊ HIV၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေး၊ ခွေးရူးပြန်၊ အသဲရောင် (B) ပိုး၊ (C) ပိုးတွေ၊ ရေယုန်၊ ရေခြောက်၊ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့၊ ပိုလီယို စတာတွေက Virus ကနေတစ်ဆင့် ဖြစ်ပွားတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ Virus ပိုးတစ်ချို့ဟာ ခွေး၊ ခြင် မှာ အရင်ကူးစက်ခံရပြီးမှ လူကို ကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Virus ကိုတွန်းလှန်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထွက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Virus ကို ခုခံနိုင်တဲ့ သွေးတွေထဲကနေ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Corona Virus ကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ထိုနည်းတူ ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့နည်းလမ်းတွေကတော့ Virus တွေကို ယဉ်ပါးအောင်မွေးပြီး ကာကွယ်ဆေးအနေနဲ့ ပိုးကိုပြန်ထိုးသွင်းတာတွေ ပြုလုပ်ရပါတယ်။
ဥပမာ-ဝက်သက်ရောဂါ၊ အသဲရောင် (B) ပိုး၊ (C) ပိုး စသဖြင့်ပေါ့။ Corona Virus ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့အတွက်ကတော့ အဆင့်တွေများတဲ့အတွက် အချိန်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Virus တွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇ အမြဲပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲနေတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ- တုတ်ကွေး Virus ကာကွယ်ဆေးကို တစ်ကြိမ်ထိုးရုံလောက်နဲ့ မရပါဘူး၊ နောက်တစ်နှစ်မှာ မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အတွက် အမြဲတမ်း ပြန်ထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Corona Virus ကာကွယ်ဆေးဟာ ဘယ်အချိန်ရမလဲဆိုတာ မသိတဲ့အတွက် မိမိကိုယ်တိုင်က အစပြုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ Virus ဟာဘယ်လိုပုံစံလဲ၊ (Bacterium) ဗက်တီးရီးယား၊ (Parasite) လို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပါးကောင်တွေနဲ့ မတူဘူးဆိုတာကိုနာလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်။
ဗိုငျးရပျဈ (Virus) ဟာ ဗကျတီးရီးယား (Bacteria)၊ ပါရာဆိုကျ (Parasite) လို့ချေါတဲ့ ကပျပါးကောငျတှနေဲ့ ဘာကှာခွားသလဲ? Virus ဆိုတာဘာလဲ?
Virus ကို အနုဇီဝကွညျ့မှနျပွောငျး Electron Microscope နဲ့ ကွညျ့ရမယျ၊ ရိုးရိုး Microscope နဲ့ကွညျ့မယျဆိုရငျ သာမနျအားဖွငျ့ မမွငျနိုငျဘူး၊ ကောငျးမှနျရှငျးလငျးစှာ မွငျနိုငျဖို့အတှကျ Electron Microscope တောငျမှ မီးတှနေဲ့ ကှနျပြူတာတှနေဲ့ ကွညျ့မှသာ မွငျနိုငျတာဖွဈပါတယျ။ အနုဇီဝအကောငျလေးတှထေဲမှာ Virus က အသေးငယျဆုံးပဲ။
(Bacterium/Bacteria) ဗကျတီးရီးယား ဆိုတဲ့အကောငျလတှေကေ ဆဲလျလေးတှနေဲ့နတေယျ၊ သူတို့တှဟော မြိုးပှားနိုငျတဲ့စှမျးရညျရှိပါတယျ။
Parasite လို့ချေါတဲ့ ကပျပါးကောငျအမြိုးစားတဈခုဖွဈတဲ့ ငှကျဖြားပိုးလိုဟာမြိုးတှရှေိတယျ၊ အဲ့ပိုးတှကေ ကွီးထှားတယျ၊ အဆငျ့အမြိုးမြိုးပွောငျးတယျ၊ သူတို့ရဲ့ ဘဝသံသရာ (Life Cycle) ဆိုတာရှိတယျ၊ အဆငျ့အမြိုးမြိုးပွောငျးပွီး “ခွငျ”ထဲကိုဝငျသှားတယျ၊ အဲ့ဒီကနေ အဆငျ့ဆငျ့ပွောငျးလဲပုံတှကေို Electron Microscope ထဲမှာ ကွညျ့လို့ရတယျ။ ဒါဟာ Parasite ဆိုတဲ့ ကပျပါးကောငျလေးတှေ သှေးဥထဲကိုဝငျတယျ၊ သှေးတှပေေါကျထှကျကုနျတယျ၊ ဒီလို အသေးအမှားလေးတှအေစ ကွညျ့ရှုနိုငျတယျ။ အဲဒီအမြိုးစားတှထေဲမှာ (Bacterium) ဗကျတီးရီးယား၊ (Parasite) လို့ချေါတဲ့ကပျပါးကောငျတှထေကျ Virus ဟာအသေးငယျဆုံးဖွဈပါတယျ။
Virus နဲ့ပတျသကျပွီးပွောရမယျဆိုရငျ တခြို့က အသကျရှိတဲ့အရာမဟုတျဘူးလို့ သုံးသပျကွတယျ။ (Bacterium) ဗကျတီးရီးယား၊ (Parasite) လို့ချေါတဲ့ ကပျပါးကောငျတှကေိုတော့ သကျရှိလို့သတျမှတျကွတယျ။ Virus ကိုတော့ ဘာကွောငျ့ အသကျမရှိဘူးလို့ပွောကွတာလဲ။ Virus ဖှဲ့စညျးပုံဟာ မြိုးရိုးဗီဇပါဝငျတဲ့ မျောလီကြူးလေးတှဖွေဈတယျ၊ ဆံခညျြမြှငျထကျတောငျ သေးငယျပါတယျ။ အမှုနျအမှား မျောလီကြူးလေးသာဖွဈပွီး (Bacterium) ဗကျတီးရီးယား၊ (Parasite) လို့ချေါတဲ့ကပျပါးကောငျ တှလေိုမြိုး မြိုးမပှားနိုငျပါဘူး၊ အဲ့ဒါကွောငျ့ Virus ကို သကျရှိအဖွဈ မသတျမှတျတာဖွဈတယျ။
Virus ဆိုတဲ့စကားလုံးက Varion ဆိုတဲ့လကျတငျစကားက ဆငျးသကျလာပွီး သူ့အဓိပ်ပာယျက (Poison) အဆိပျလို့ အဓိပ်ပါယျရတယျ။ ဒီအမှုနျလေး သေးသေးလေးတဈခုက Virus/အဆိပျဖွဈပွီး လူတှရေဲ့ ဆဲလျ၊ တိရိစ်ဆာနျတှရေဲ့ဆဲလျ၊ သဈပငျတှရေဲ့ ဆဲလျတှထေဲ ဝငျသှားပွီးရငျမှ စတငျပှားတာဖွဈပါတယျ၊ မြိုးပှားတာမဟုတျပဲ အကောငျရပှေားတာဖွဈပါတယျ။
(ဥပမာ- ဓာတျပုံ Copy ပှားတာနဲ့ တူညီပါတယျ)။ Virus ကိုမြိုးရိုဗီဇနဲ့ တညျဆောကျထားတာဖွဈပါတယျ။ မြိုးရိုးဗီဇပါလို့ တဈခြို့က သကျရှိလို့သတျမှတျပမေယျ့၊ မြိုးမပှားနိုငျတဲ့အတှကျ သကျရှိမဟုတျပါဘူး။ Virus ကို သတျလို့မရတာတှရှေိတယျ၊ လူထဲရောကျမှ သအေောငျပွနျလုပျရတာတှရှေိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Virus တျောတျောမြားမြားက သူအလိုလို ကှယျပြောကျတာမြားပါတယျ။
လူခန်ဓာကိုယျထဲဝငျသှားရငျတောငျ တခြို့ Virus တှဟော သူ့လိုလို သနေိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Virus ဟာ သူ့အလိုလိုမပကျြစီးခငျ တိုကျခိုကျလိုကျတဲ့ဒဏျက Corona Virus လိုမြိုး အဆုတျကွီးတဈခုလုံး ပကျြစီးသှားတာမြိုး၊ တဈရှူးဆဲလျတှေ ပကျြစီးသှားတာမြိုး ဖွဈစပေါတယျ။ ကိုယျခန်ဓာရဲ့ အစိတျပိုငျးတဈခြို့ ပကျြစီးသှားတဲ့အတှကျ လူကို သစေနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Virus ဟာ (Poison) အဆိပျ ဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ လူတှကေို တိုကျခိုကျတာဖွဈပါတယျ။
Virus ဟာ သူ့ပုံတူပှားဖို့အတှကျ လူ၊ တိရိစ်ဆာနျ၊ သဈပငျ တဈခုခုရဲ့ ကလကျစီးလိုအပျပါတယျ။ လူတှစေီ Virus ရောကျဖို့ဆိုရငျ အရပွေား၊ ပါးစပျ၊ နှာခေါငျး၊ မကျြစိ၊ နားထဲကဝငျတဲ့ Virus ရှိတယျ။ လိငျကနတေဈဆငျ့ကူးတဲ့ Virus ရှိတယျ။ အမြိုးမြိုး ဝငျပေါကျတှရှေိတဲ့အထဲကမှ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျက အသကျရှူလမျးကွောငျးကနေ ကူးစကျတဲ့ Virus ဖွဈပါတယျ။
ဝကျသကျရောဂါ၊ HIV၊ သှေးလှနျတုတျကှေး၊ ခှေးရူးပွနျ၊ အသဲရောငျ (B) ပိုး၊ (C) ပိုးတှေ၊ ရယေုနျ၊ ရခွေောကျ၊ လိငျအင်ျဂါကွှကျနို့၊ ပိုလီယို စတာတှကေ Virus ကနတေဈဆငျ့ ဖွဈပှားတဲ့ရောဂါတှဖွေဈပါတယျ။ Virus ပိုးတဈခြို့ဟာ ခှေး၊ ခွငျ မှာ အရငျကူးစကျခံရပွီးမှ လူကို ကူးစကျတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အပျေါမှာဖျောပွခဲ့တဲ့ Virus ကိုတှနျးလှနျဖို့ ကာကှယျဆေးတှေ ထှကျရှိပွီးသားဖွဈပါတယျ။ Virus ကို ခုခံနိုငျတဲ့ သှေးတှထေဲကနေ ကာကှယျဆေးထုတျလုပျကွတာဖွဈပါတယျ။
Corona Virus ကို ကာကှယျဖို့ဆိုရငျ ထိုနညျးတူ ပွုလုပျရမှာဖွဈပါတယျ။ တဈခြို့နညျးလမျးတှကေတော့ Virus တှကေို ယဉျပါးအောငျမှေးပွီး ကာကှယျဆေးအနနေဲ့ ပိုးကိုပွနျထိုးသှငျးတာတှေ ပွုလုပျရပါတယျ။
ဥပမာ-ဝကျသကျရောဂါ၊ အသဲရောငျ (B) ပိုး၊ (C) ပိုး စသဖွငျ့ပေါ့။ Corona Virus ကာကှယျဆေးထုတျဖို့အတှကျကတော့ အဆငျ့တှမြေားတဲ့အတှကျ အခြိနျကွာမှာဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ Virus တှဟော မြိုးရိုးဗီဇ အမွဲပွောငျးနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ တဈနှဈနဲ့တဈနှဈ မြိုးရိုးဗီဇ ပွောငျးလဲနတေတျပါတယျ။
ဥပမာ- တုတျကှေး Virus ကာကှယျဆေးကို တဈကွိမျထိုးရုံလောကျနဲ့ မရပါဘူး၊ နောကျတဈနှဈမှာ မြိုးရိုးဗီဇ ပွောငျးလဲသှားနိုငျတဲ့အတှကျ အမွဲတမျး ပွနျထိုးဖို့လိုအပျပါတယျ။ Corona Virus ကာကှယျဆေးဟာ ဘယျအခြိနျရမလဲဆိုတာ မသိတဲ့အတှကျ မိမိကိုယျတိုငျက အစပွုကာကှယျဖို့ဖွဈပါတယျ။
ကဲ Virus ဟာဘယျလိုပုံစံလဲ၊ (Bacterium) ဗကျတီးရီးယား၊ (Parasite) လို့ချေါတဲ့ကပျပါးကောငျတှနေဲ့ မတူဘူးဆိုတာကိုနာလညျထားဖို့လိုတယျနျော။